गण्डकीमा अब २४ घण्टा भित्रै पिसिआर रिपोर्ट ! – News Book Online
गण्डकीमा अब २४ घण्टा भित्रै पिसिआर रिपोर्ट !
जेष्ठ ९, २०७८ २१:११ प्रकाशित
पोखरा । गण्डकीमा अब २४ घण्टा भित्र पिसिआर रिपोर्ट पाइने भएको छ । कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेसँगै अहिले प्रदेशमा रिपोर्टमा ढिलाई भई रहेको गुनासो बढी रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सँगै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकीमा २४ घण्टा भित्रमा नै पिसिआर रिपोर्ट उपलब्ध गराउने दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्तालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पिसिआरको रिपोर्ट २४ घण्टा भित्रै उपलब्ध गराउने प्रदेशका एघारै जिल्लामा कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका पहलहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्महालेपछि कोरोना रोकथामका लागि यस्ता पहल गरेका छन् ।
— पिसिआर रिपोर्ट २४ घन्टाभित्र आउने व्यवस्था । संक्रमण दर बढेका कारण अहिलेसम्म प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थुप्रिएका २ हजारभन्दा बढी स्वाब काठमाडौंमा लगेरसमेत परीक्षण गरी रिपोर्ट आउने क्रममा रहेको ।
— जिल्लाजिल्लामा संकलित स्वाब त्यसै दिन वा अर्को दिनको १० बजेभित्र पठाउन निर्देशन दिइएको ।
— प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा एन्टिजेन किट १० हजार थान उपलब्ध गराइएको ।
— एन्टिजेन परीक्षण वा स्वाब परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिए होम आइसोलेसनमा बस्ने र लक्षण देखिए तुरुन्तै अस्पताल ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको ।
— कोभिड व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्ने गरी जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट खर्च गर्न सक्ने गरी ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५र५ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको ।
— संस्थागत आइसोलेसनका लागि प्रदेशका प्रत्येक पालिकाहरुलाई ५र५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध । यसअघि ७३ पालिकालाई पठाएको बाहेक ।
— प्रदेशका सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने सिलसिलामा प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र तनहुँमा मात्रै टेन्डर आह्वान भइ सम्झौताको क्रममा रहेको । अरु जिल्लामा प्लान्ट स्थापना भइसकेको छ । मनाङमा सामान पुगेर जडानको प्रक्रियामा छ ।
— जिल्लाजिल्लामा आइसोलेसन वार्डमा शय्या वृद्धि गर्न लमजुङ, मध्यविन्दु र बागलुङमा टेन्डर भइसकेको छ ।
— स्याङ्जा र लमजुङमा पिसिआर परीक्षणका लागि मेसिन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
— नवलपुरको मध्यबिन्दु, बागलुङ र स्याङ्जामा अक्सिजन प्लान्टको क्षमता वृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
( प्रदेशको भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका प्रदेशबाट खोप लगायत स्पास्थ्य सामग्रीलाई निरन्तर सम्पर्क, संवाद र समन्वय भइरहेको ।
( देश र विदेशमा रशेका उच्च दक्ष चिकित्सकहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको ।
( प्रत्येक जिल्ला अस्पतालर स्वास्थ्य कार्यालयलाई अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि ५ लाखका दरले व्यवस्था गरिएको ।